Ukudlala i-Poker kwi-Bubble
Amacandelo okudlala i-Poker kwi-Bubble
Kwintsebenzo ye-poker, ibhola liyinqaku kumqhudelwano apho umdlali olandelayo angayi kuphumelela nayiphi na imali, kodwa abanye abadlali baya kuzuza imali okanye imali. Ngamanye amagama, ukuba umdlalo uhlawula abadlali abaphezulu abangama-27, xa kukho abantu abangama-28 abaseleyo, bahlala kwibhola. Lo mdlali onamahloni okhutshwe ngo-28 kuthiwa uyakhutshwa "kwi-bubble," okanye ukuba yi-bubble kwaye iye yavuthwa.
Ixesha le-bubble yilapho izinto zingathula, ziqatha, okanye zinyama. Abadlali badla ngokutshintsha indlela yabo yokudlala ngokuxhomekeka kwi-stack yabo. Ixesha lokufa okanye lokufa xa kufuneka wenze isigqibo sokuba unako ukusinda ukuze uthathe umvuzo okanye kufuneka udlala ngokukhawuleza ukukhupha abanye abadlali.
Abadlali bebhola banokupheliswa ngamaqela amabini. Kukho abo abanomgomo wokusinda nje i-bubble baze bathathe ekhaya imali ethile. Emva koko kukho abo badlalayo ukuphumelela, kwaye ngubani ongasebenzisa ibhola ukuqokelela ii-chips ezininzi.
Uyakubona ukuba abanye abadlali bathatha zonke izandla, zinezandla ezilungileyo, badlala njengento eqinile njengoko kunokwenzeka. Okwangoku, abanye abadlali baqala ukuphakamisa nokuhamba konke-ngezandla ezininzi. Ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kubukhulu bomgca wakho kunye nendlela abanye abadlali badlala ngayo.
Isicwangciso sakho siya kuxhomekeka ekubeni bangaphi abadlali abasala etafileni yakho, ebonisa ukuba zingaphi izandla oza kuphila ukusinda kunye ne-antes kunye nezimpumputhe ezinkulu kunye nabancinci.
I-bubble nayo inika ithuba elihle lokuqokelela ii-chips ngokudlala ngokungaqhelekanga kunye neentlonelo, ingakumbi ukuba unentonga enkulu.
I-Stack enkulu kwi-Bubble
Wena usemgangathweni ophezulu xa uqokelele ezininzi iipups phambi kwebhola. Ngoku ungadlala ngokugqithiseleyo kwaye usebenzise ngokuninzi umdlalo oqhubekayo wokusinda ngabanye abadlali.
Unokubamba iimfama ezikhethiweyo. Uphantsi koxinzelelo oluncinci kuba ngokwenene kulungele ukugcina ibhola lihamba kwaye likunike amathuba okuba ungeze kwi-stack yakho. Oko kuthetha ukuba akufanele ubize zonke iiphakamiso njengoko unokunqumla ilahleko zakho nakwephi na icala. Uzakufuna ukugcina ngokucophelela iindleko eziqhelekileyo njengoko zizo ezo zingadla kwi-stack yakho xa ungaphambuki komdlalo wabo.
Umtya ophakathi kwiBhotile
Kungaba nzima ukudlala ngokukhawuleza xa unesidingo esiphakathi kwibhola, kodwa oko kuya kubangela umvuzo omncinci kuphela kwaye ulahlekelwe ngumvuzo kumaphuso amakhulu. Kukhethwa ngobulumko ukudlala ngokukhawuleza kodwa uqhubeke udlala, ukhangele amathuba okuba ungeze kwi-stack yakho.
Umgca omfutshane kwiBhotile
Ukuba une-8-10 enkulu ephosakeleyo kwi-bubble, ugciniwe emfutshane, kodwa awukho kwindawo yengozi apho kufuneka ufumane okanye uqhube yonke into. I-stack yakho isenokusongela ngokwaneleyo ubani ovula ukuphakanyiswa. Kodwa xa uneminyaka engama-5-6 ephosakeleyo, ungananto yokukhetha kodwa ukunyanga okanye ukungena kuyo yonke into, ukhetha iziqalo zakho ngokuhlakanipha kwaye unqume ukuba ngaba abachasi bakho bayadlala okanye bazinzile.
Isikhokelo sakho sokuPhakamisa iziGaba zeeNgcaciso ezivela phezulu ukuya ngasezantsi
Ukudala I-Tracking Simple Tracking Spreadsheet
Idlalwa njani umdlalo weText Hold'em Bonus yeTeat Table game
Imidlalo ephezulu ye-Poker yeVidiyo
IiSayithi zeMidlalo zePlayer ze-Intanethi zamahhala
Qonda indawo kwiPoker - Indawo yePoker ichazwe
Isingeniso kwisixhobo sokuThulwa kweRen Meridian
Amagama ahlanganisayo Inkcazo kunye nemizekelo
Ngaba i-Glass ikhusela ukukhanya kwe-UV? Unokufumana Ukutshiswa Kwelanga?
Kutheni Iingqungquthela Zisongela?
I-Glossary ye-Art: I-Wet-on-Wet
I-Diencephalon Icandelo leBrain
Ingqwalaselo yeMbali yePolisi yaseMerika yaseMelika
IiVebhu ezingenasimo kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo
Abafazi be-Ancestors baZen
Iigqeba zeGolf neNgcaciso
Izigulane zezityalo, i-Family Miridae
I-Admissions yeekholeji yaseLafayette
Ingakanani Ibhanti le-US Ngaba i-China inene ngempela?